အာဖဂန်ပုံရိပ်များ – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on May 4, 2010May 7, 2010 by kyawkyawoo	Posted in photo essayTagged အာဖဂန, အာဖဂန်ပုံရိပ်များ, အာဖဂန်လူမျို, အမေရိကန်မရိန်း, ကျော်ကျော်ဦး, တွေးမိတွေးရာ, photo essay, The Big Picture photoblog.	Big Picture photoblog မှာဖော်ပြထားတဲ့ရင်ထဲကို….
အမေရိကန်မရိန်းတပ်ရဲ့ V22 Osprey အမျိုးအစားလေယဉ်ပုံကိုကြည့်ပြီးအဗာတာရုပ်ရှင် ကိုပြေးမြင်မိပါရဲ့
မရိမ်းတပ်သားရဲ့ကျောမှဆေးမင်ကြောင်ကဒိုင်းယားစရိတ်ရဲ့ လက်နက်ကိုင်ညီနောင်များဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးသာသနာပြူသီချင်းစာသားပါ။ Baptism of Fire ဆိုတာပြင်သစ်ဘာသာစကားကလာတဲ့ သမ္မာကျမ်းတော်လာစစ်သားရဲ့ပထမဆုံး
အတွေ့အကြုံ ဒါမှမဟုတ် ရေရှူကိုငြင်းပယ်သူတွေအတွက် အပြစ်ဒဏ်လို့ (မက်သယူး ၃း၁၁) ဆိုပါတယ်။
ဒီပုံကအတော်စိတ်မကောင်းစရာပါ။ အလ္လာရဲ့ နာမတော်အပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်ထားပြီး သေနပ်နဲ့ရေရှူလက်ဝါးကပ်ပုံကိုချိတ်ဆွဲပြထားပါတယ်
ဆရာကံချွန်အမှတ်တရကာတွန်းများAn Open letter to Dr Zakir Naik and Sharuk Khan